A na - ahapụta data buru ibu ma nakọtara site na ụlọ ọrụ na gọọmentị maka nzube ndị ọzọ karịa nyocha. N'iji data a maka nyocha, ya mere, choro iburughachite.
Ụzọ mbụ nke ọtụtụ ndị na-ezute nchọpụta ọha na eze na afọ dijitalụ bụ site na ihe a na-akpọkarị data buru ibu . N'agbanyeghị na eji okwu a eme ihe n'ozuzu, enweghị nkwekọrịta banyere ihe nnukwu data ọbụla dị. Otú ọ dị, otu n'ime nkọwa ndị kachasị ọnụ nke nnukwu data na-elekwasị anya na "3 V": Mpịakọta, Ọdịiche, na Ọsọ. N'ụzọ dị nkpa, enwere otutu data, na ụdị usoro dị iche iche, ọ na-ekekwa ya mgbe niile. Ụfọdụ ndị na-akwado data buru ibu tinyekwara "V" ndị ọzọ dịka Veracity na Uru, ebe ụfọdụ ndị nkatọ na-agbakwunye Vs dịka Ogwu na Ọcha. Kama 3 "V" (ma ọ bụ 5 "V" ma ọ bụ 7 "Vs"), maka nzube nke nchọpụta mmadụ, echere m na ebe ka mma ịmalite bụ 5 "W": Ònye, Gịnị, ebee, mgbe , na Ntak. N'ezie, ana m eche na ọtụtụ n'ime ihe ịma aka na ohere ndị isi nnukwu data na-esite na-esite na otu "W": Ntak.
N'ime oge analog, ọtụtụ n'ime data ndị e ji mee nnyocha maka ọha mmadụ ka e kere maka nzube nke ime nnyocha. Na afọ dijitalụ, Otú ọ dị, ọ bụ ụlọ ọrụ na ndị gọọmentị na-emepụta data dị ukwuu maka nzube ndị ọzọ karịa nchọpụta, dị ka ịnye ọrụ, ịmepụta uru, na inye iwu. Otú ọ dị, ndị na-emepụta ihe emeela ka ị ghọta na ị nwere ike ịghachite ụlọ ọrụ a na data gọọmenti maka nchọpụta. Icheta ihe omumu nke ihe omumu na isi nke 1, dika Duchamp weghachitere ihe achotara ihe iji meputa nka, ndi oka sayensi nwere ike ichogharia ugbu a achọta ihe omuma iji mee nnyocha.
O doro anya na ohere buru ibu maka ịghaghachite, iji data ndị e mepụtara maka ebumnuche nke nchọpụta na-enyekwa nsogbu ndị ọhụrụ. Tụlee, dịka ọmụmaatụ, ọrụ mgbasaozi mmadụ, dịka Twitter, na nnyocha nke ọha mmadụ, dị ka General Social Survey. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke Twitter bụ inye ndị ọrụ ya ọrụ na iji nweta uru. N'aka nke ọzọ, General Social Survey na-elekwasị anya na ịmepụta data maka izugbe maka nchọpụta ọha na eze, karịsịa maka nyocha nke ọha mmadụ. Nke a dị iche na ihe mgbaru ọsọ pụtara na data kere site na Twitter na nke ndị General Social Survey kere nwere ụdị dị iche iche, ọ bụ ezie na a pụrụ iji ha abụọ na-amụ ihe ọha na eze. Twitter na-arụ ọrụ n'ogo na ọsọ na General Social Survey enweghị ike ịkwado, mana, n'adịghị ka General Social Survey, Twitter adịghị eji nlezianya na-emepụta ndị ọrụ ma anaghị arụ ọrụ iji nọgide na-atụnyere oge. N'ihi na ihe ndekọ data abụọ a dị nnọọ iche, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ikwu na General Social Survey dị mma karịa Twitter ma ọ bụ ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ nhazi oge zuru ụwa ọnụ (dịka, Golder and Macy (2011) ), Twitter kacha mma. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta mgbanwe mgbanwe oge dị ukwuu maka ịkwalite àgwà dị na United States (dịka DiMaggio, Evans, and Bryson (1996) ), mgbe ahụ, General Social Survey bụ nhọrọ kacha mma. N'ikwu ya n'ozuzu, karia igbali ikwusi uka na isi ihe omuma data di nma ma obu karia ihe omuma ndi ozo, isi nke a ga-agbali ime ka ihe di iche iche nke nyocha ajuju buru ibu ihe omuma data nwere ihe ndi mara mma na ihe di iche iche ha nwere ike ghara ibu ezigbo.
Mgbe ị na-eche banyere isi mmalite data, ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-elekwasị anya na ntanetị data kere ma nakọtara site na ụlọ ọrụ, dịka nchịkọta ọchụchọ na mgbasa ozi mgbasa ozi. Otú ọ dị, esemokwu a dịpụrụ adịpụ na-ewepụta ụzọ abụọ dị mkpa nke nnukwu data. Nke mbụ, ịbịakwute ụlọ ọrụ nnukwu data sitere na ngwaọrụ dijitalụ na ụwa nkịtị. Dịka ọmụmaatụ, na isi nke a, m ga-agwa gị gbasara ọmụmụ nke weghaara data nlele maka ụlọ ahịa iji chọpụta otú mmepụta nke ndị ọrụ ibe ya (Mas and Moretti 2009) nwere ike imetụta ịrụ ọrụ nke onye ọrụ. Mgbe ahụ, n'isiakwụkwọ ndị na-esote, aga m agwa gị gbasara ndị nchọpụta na-eji akụkọ mkpanaka (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) na data ịgba ụgwọ nke ndị ọrụ eletrik (Allcott 2015) . Dịka ihe atụ ndị a na-egosi, ụlọọrụ nnukwu data sitere na ihe karịrị naanị omume n'Ịntanet.
Isi ihe abụọ dị mkpa nke nnukwu data nke ịdabere na-elekwasị anya na omume ịntanetị bụ data nke gọọmenti kere. Ndị ọchịchị a, nke ndị na-eme nchọpụta na-akpọ ihe ndekọ nchịkọta ọchịchị , gụnyere ihe dịka akwụkwọ ndekọ ego, akwụkwọ ndekọ ụlọ, na ndekọ ndekọ dị mkpa (dịka akwụkwọ ndekọ nke ọmụmụ na ọnwụ). Gọọmentị na-ekepụta ụdị data a, na ụfọdụ, ọtụtụ narị afọ, na ndị ọkà mmụta sayensị ejiriwo ha mee ihe maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị ọkà mmụta sayensị nọ. Ihe gbanwere, Otú ọ dị, nchịkwa, nke mere ka ọ dị mfe karị ka gọọmentị nakọta, zipu, chekwaa, ma nyochaa data. Dịka ọmụmaatụ, na isi nke a, m ga-agwa gị banyere ọmụmụ nke nlọghachite data si na New York City gọọmenti dijitalụ dijitalụ iji kwado esemokwu dị mkpa na akụ na ụba (Farber 2015) . Mgbe ahụ, n'isiakwụkwọ ndị na-esote, m ga-agwa gị gbasara otu nchịkọta ntuli aka gọọmenti gbakọtara na nyocha (Ansolabehere and Hersh 2012) na nnwale (Bond et al. 2012) .
Echere m na echiche nke ịghaghachi azụ bụ ihe dị mkpa n'ịmụta site na nnukwu ihe ọmụma data, ya mere, tupu ịkọwa kpọmkwem banyere Njirimara nke nnukwu data data (ngalaba 2.3) na otu esi eme ihe ndị a na nyocha (ngalaba nke 2.4), ga-amasị m iji nye ndụmọdụ abụọ gbasara izughachi. Nke mbụ, ọ nwere ike ịnwa ịchọrọ iche banyere ọdịiche dị iche iche nke m setịpụrụ dị ka ihe dị n'etiti "achọtara" data na "e mere" data. Nke ahụ dị nso, ma ọ bụghị ezi nri. Ọ bụ ezie na, site na ndị nchọpụta, a na-achọta "nnukwu ihe ọmụma data", ọ bụghị naanị na ha si na mbara igwe daa. Kama nke ahụ, ndị mmadụ na-emepụta ihe ọmụma data ndị "chọtara" maka ihe ụfọdụ. Ebe ọ bụ na mmadụ "chọtara" data, onye ọ bụla, m na-akwado mgbe niile na ị gbalịrị ịghọta ihe niile gbasara ndị mmadụ na usoro ndị kere data gị. Nke abụọ, mgbe ị na-echeghachite data, ọ na-enyekarị aka ịchọta ihe dataset dị mma maka nsogbu gị ma jirizie dataset ahụ dị mma na nke ị na-eji. Ọ bụrụ na ịnakọtaghị data gị n'onwe gị, enwere ike ịiche ọdịiche dị n'etiti ihe ị chọrọ na ihe ị nwere. Ịhụ na ọdịiche ndị a ga-enyere aka dokwuo anya ihe ị nwere ike na-enweghị ike ịmụta site na data ị nwere, ọ pụkwara ịkọwa data ọhụrụ ị ga-anakọta.
Na ahụmahụ m, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkà mmụta sayensị na-agakarị ịmaliteghachi ichegharị kpamkpam. Ndị ọkà mmụta sayensị, ndị na-arụ ọrụ na data haziri maka nyocha, na-adị ngwa iji kọwaa nsogbu ndị ejighachite data mgbe ha na-eleghara ikike ya anya. N'aka nke ọzọ, ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụkarị ngwa ngwa ịchọta data mgbe ha na-eleghara adịghị ike ya anya. Dị ka o kwesịrị ịdị, ụzọ kasị mma bụ ngwakọ. Nke ahụ bụ, ndị nchọpụta kwesịrị ịghọta àgwà nke nnukwu data-ma nke ọma ma ihe ọjọọ-ma chọpụta otú ị ga-esi mụta ihe n'aka ha. Ma, nke ahụ bụ atụmatụ maka isi nke isi nke a. Na mpaghara na-esote, m ga-akọwa njirimara iri nke nnukwu isi mmalite data. Mgbe ahụ, na mpaghara na-esonụ, m ga-akọwa nchịkọta nchọpụta atọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma dị ka data dị otú ahụ.